सेमील्ट: आईएमवीडीब संगीत भिडियो स्क्रैपर
इन्टरनेट को दुनिया मा, सबै डेटा एक पठनीय र स्केलेबल मा पेश गर्नु पर्छ ढाँचा. चाहे तपाईं वांछित PDF कागजातहरूबाट जानकारी स्क्रिप्ट गर्नुहोस् वा छवि र भिडियोहरूबाट डेटा संकलन गर्नुहोस्, तपाइँ सधैँ एक विश्वसनीय उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ. IMVDb संगीत भिडियो स्क्रैपर बजारमा सबैभन्दा राम्रो भिडियो स्क्रैपिंग उपकरण हो. यसले तपाईंको मनपर्ने YouTube र DailyMotion भिडियोहरूमा सही डाटा प्रदान गर्न निश्चित गर्दछ र धेरै सुविधाहरूको साथ आउँछ. IMVDb सङ्गीत भिडियो स्क्रैरको उत्कृष्ट संस्करण तल उल्लेख गरिएको छ.
Pyspider भिडियो स्क्रैपर:
Pyspider न केवल एक भिडियो स्क्रैपर छ तर एक शक्तिशाली वेब क्रलर. यो यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेसको लागि चिनिन्छ र एकै पटक भिडियो र तस्बिरहरूको ठूलो संख्या स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ. Pyspider संग, तपाईं स्क्रैप गरिएका फाईलहरू सीधा आफ्नो हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वा जेएसओएस वा CSV ढाँचामा आयात गर्न सक्नुहुनेछ।. यसले पायथन2र C ++ को समर्थन गर्दछ र तपाईंको साइटको खोजी इञ्जिन रेटिङ सुधार गर्न मद्दत गर्दछ. तपाईं आफ्नो भिडियो र अडियो फाईलहरू कसरी स्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे विचार गर्न यसको अनलाइन डेमो जाँच गर्न सक्नुहुन्छ. Apache2द्वारा लाइसेन्स, यो IMVDb संगीत भिडियो स्क्रैपर को एक उन्नत संस्करण हो.
यो अर्को व्यापक र प्रसिद्ध भिडियो स्क्रैपर हो।. मकोनिकलसाउप केवल एक डेटा स्क्रैपिंग उपकरण हो तर यो पनि एक क्रलिंग लाइब्रेरी छैन. यसले वांछित छविहरू र भिडियो फाइलहरूबाट उपयोगी जानकारी निकाल्छ र तपाईंको HTML कागजातहरू र PDF फाइलहरू पठाउन योग्य ढाँचामा रूपान्तरण गर्छ. तपाईंले भर्खरको YouTube भिडियो र म्यानुअल URL को URL सम्मिलित गर्नु पर्छ। सोपले यसलाई तुरुन्तै स्क्रैपिङ सुरु गर्नेछ. साथै, यो उपकरणले तपाईंको वांछित छविहरू र भिडियोहरू तुरुन्तै अनुक्रमणिका गर्न मद्दत गर्दछ. म्यानुअल एसओप एमआईटीद्वारा इजाजतपत्र दिइएको छ र तपाईंलाई प्रोग्रामिंग क्षमताको आवश्यकता पर्दैन.
कोला IMVDb संगीत भिडियो स्क्रैपर को एक उन्नत संस्करण हो।. यो स्क्रैपिंग ढाँचाले तपाईंको डेटालाई विभिन्न ढाँचाहरू जस्तै CSV र JSON मा निर्यात गर्दछ वा यसलाई सिधा डाउनलोड गर्दछ तपाईंको हार्ड डिस्कमा।. यो बिभिन्न ईन्ट-इन एक्सटेन्सनहरू र कुकिजहरूसँग वेबसाइटहरूबाट स्क्रैपहरू भिडियोहरू र पुन: निर्देशित गर्दछ. तपाईंले भर्खरै भिडियोलाई स्क्रैप गर्न चाहानु भएको उल्लेख गर्नु आवश्यक छ, र कोला सेकेन्डको सन्दर्भमा सार्थक डेटा हटाउनेछ.
पोर्टलिया भिडियो स्क्रैपर:
यदि तपाईं कोडहरूसँग सहज छैन भने, पोर्टाले दृश्य इन्टरफेस प्रदान गर्दछ र तपाईंको काम सजिलो बनाउँछ।. यसले आफैलाई एक उन्नत वेब क्रलिंग र भिडियो स्क्रैपिंग ढाँचाको वर्णन गर्दछ. पोर्टा YouTube र DailyMotion भिडियोहरू दुवै स्क्रैप गर्न सक्छन् र उद्यमहरूको लागि उपयुक्त छ.
Demiurge फेरियुस2र3दुवै को समर्थन गर्दछ र एक नै समय मा विभिन्न स्क्रैपिंग कार्य गर्दछ. यो भिडियो सम्पादकहरू, वेबमास्टरहरू र प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ र एक मिनेटमा 40 भिडियो र अडियो फाइलहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ।.
Feedparser उद्यमहरु र समाचार पत्रहरु को लागि राम्रो छ र चेक यदि तपाईं ATOM र आरएसएस फीड मा रहन को लागी भिडियो को कोशिश गर्दै छन् जांच गर्दछ. यसले गुणवत्ता परिणामहरू सुनिश्चित गर्दछ र प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस छ. Feedparser पनि फ्रीलांसर र स्टार्टअप को लागि उपयुक्त छ र एक नि: शुल्क संस्करण मा आउछ. यसले वांछित फाइलहरूबाट आधारभूत र पढ्न योग्य सामग्री पुन: प्राप्त गर्दछ र तालिकाहरू वा सूचीहरूको रूपमा परिणाम प्रदान गर्दछ Source .